Homeसमाचारके तपाईंलाई माछा खान मन पर्छ, माछामा ७ दिनसम्म बाँच्दो रहेछ कोरोना भाइरस
October 28, 2020 admin समाचार 8796
अति संक्रा’मक कोरोनाभाइरस सतहमा कति धेरै समय’सम्म रहनसक्छ भन्ने विषयमा भ’र्खरै हामीलाई थाहा हुन था’लेको छ । त्यसैले हा’मीले हाम्रो घरको ढोका’मा आउने हरेक पार्सल वा घरमा डे’लिभरी हुने खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तु’हरुलाई छुनुु’अघि सेनि’टाइज गर्छौँ ।
चिसो वा फ्रिज गरि’एको खाद्यान्नको प्याकमा कति लामो समयसम्म कोभिड–१९ भाइरस बाँच्न’सक्छ भन्नेबारे पनि भर्खरै जानकारी आउँदैछ । भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ अनुसन्धा’नअनुसार सार्स–कोभ–२ चिसो स्याल्मन माछामा एक सातासम्म बाँच्न’सक्छ र सायद, संक्रा’मक पनि हुनसक्छ । यसबारे धेरै प्रश्न’को जवाफ भने अनु’त्तरित छ ।
जस्तो – के माछा पका’उँदा भाइरस मर्छ ? स्याल्मन मा’छामा मात्रै भा’इरस यति लामो समय रहन्छ वा अन्य मा’छा पनि रहन्छ ? यी प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ नआएस’म्म फ्रोजन फुड’को सुरक्षा पाटो अस्पष्ट नै रहने जनस्वा’स्थ सम्बन्धी पोर्टल हेल्थ सट्स डटकमले जनाएको छ । साउथ चाइना एग्रिकल्चर विश्ववि’द्यालय र गोन्जओस्थित गुवान्गडोङ एकेडेमी अफ एग्रि’कल्चर साईन्से’सको अनुसन्धानले यस तथ्यलाई उजागर गरेको हो ।
अनुस’न्धानका क्रममा लिइएको स्याल्मो’न माछाको नमूनाअ’नुसार ८ दिनसम्म ४ डिग्री सेल्सीयस ताप’क्रममा कोरोना भा’इरस बाँचेको देखिएको थियो । झन्डै यही ताप’क्राममा राखेर माछाहरुको ओसा’रपसार गरिन्छ । गत जुनयता चिनियाँ अधिका’रीहरुले आयातित मासु, प्याकेजिङ र कन्टेनरहरु’लाई कोभिड–१९ को संभावित स्रोत मानेर अनु’सन्धान गरिरहेका छन् ।
प्या’केजिङ गरिएका खाद्या’न्नमा बारम्बार किटाणुु’को संकेत भेटिएपछि उनीहरुले यस्तो अनुस’न्धान थालेका हुन् । चिनियाँ अधिका’रीहरुका अनुसार ५ लाख’भन्दा बढी नमूनाको परीक्ष’ण गर्दा ६ वटा पोजेटिभ भेटिएका छन् । माछालाई डेलि’भरीको समय शुन्यदेखि ४ डिग्री सेल्सि’यसमै राख्नुुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही नरहेको अनुसन्धा’नकर्ताहरु बताउँछन् । -इ ताजा खबर बाट
December 18, 2020 admin समाचार 6495
November 2, 2020 admin समाचार 8638
September 19, 2020 admin समाचार 11335